မြစ်ဆုံ: အရောင်များကပြောပြမည်. သင် နဲ. သင်.ချစ်သူအကြောင်း
အရောင်များကပြောပြမည်. သင် နဲ. သင်.ချစ်သူအကြောင်း
ပထမဆုံး သင်.အကြောင်းကို အရင်ဖတ်နော်။ ကိုယ်ဘာအရောင်ကြိုက်တတ်လည်းဆိုတာ တော. သိမှာပါ။ပြီးမှ ချစ်သူကြိုက်တဲ.အရောင်ကို မေးပြီး ဖတ်ကြည်.။
မ su sue san ၏ ဖေ.ဘုတ်စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင်.ပြန်လည်မျှဝေတာပါခင်ဗျာ။ အပျော်သဘောလေးနဲ.ဘဲ ကြည်.နော် ဗေဒင်ဆိုတာ အရမ်းကြီးယုံကြည်လို.မရဘူး မဟုတ်လား။ တော်ကြာ ချစ်သူတွေ ကွဲသွားမှ မောင်မောင် တရာခံဖြစ်နေအုန်းမယ် :PPPP ။ ကောင်းကွက် ဆိုးကွက် မျှပြီး ချစ်ကြပါလို. တိုက်တွန်းပါရစေ။
ပန်ရောင်ပါဘူးလာ ဟီ ချစ်သူကိုသေချာမေးကြည့်ရမယ်
21 February 2012 at 02:58
ကြိုက်တဲ့အရောင်တွေများနေလို့ မူးသွားဘီး)))
အင်း မိန်းမက ဘာရောင်ကြိုက်မှန်း မသိတာ ခက်တယ်.... :P
ဘယ်ဆီနေမှန်းမသိတာခက်တယ် :P :P
I like black & green color.But also like blue & purpule color. especially, black is my favourite.
မြတ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ အဖြူနဲ့အနက်ကို တော်တော်လေး နှစ်သက်တယ်။
My dearest like "Blue" color.If so ..I prefer like ready "Blue" ..:P
I like purple and my chit chit likes blue :) quite true.
သားကတော့ အနီရောင်ကိုကြိုက်တယ်.. ပြောရရင်. ဒီကွန်မန့်ကိုတောင် အကျီင်္အနီလေးနဲ့ရေးနေတာ
ကျနော် ကောင်မလေးက အပြာ ကြိုက်တာဗျာ